ဘက်ခမ်း ကိုပါ အလွတ်မပေးတဲ့ အိုဝင် . . . ၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားက ဖြစ်ရပ်အတွက် ဝေဖန်ပြောဆို - SPORTS MYANMAR
ဘက်ခမ်း ကိုပါ အလွတ်မပေးတဲ့ အိုဝင် . . . ၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားက ဖြစ်ရပ်အတွက် ဝေဖန်ပြောဆို
မိုက်ကယ် အိုဝင် ဟာ သူ့ရဲ့ ဘောာလုံး သမား ဘ၀ တစ်လျောက် ဖြတ်သန်းလာ ခဲ့မှု တွေ ကို စာအုပ် အဖြစ် စုစည်း ထုတ်ဝေ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ ( မနက်ဖြန် ) မှာ စာအုပ် ၊ e-book ၊ အသံဖိုင် စတဲ့ ပုံစံ မျိုးစုံ နဲ့ ဖြန့်ချီ မယ့် သူ့ရဲ့ Reboot : My Life, My Time စာအုပ် အတွက် အမြည်းစာသား တွေ ဟာ သတင်း ဌာန တွေဆီ ရောက်ရှိ နေခဲ့ပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
အိုဝင် ရဲ့ စာအုပ် အမြည်းမှာ တော့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ကို ဘယ်လို ရောက်လာပုံ ၊ နယူး ကာဆယ် မှာ လုံးဝ မကစားချင် ခဲ့ ပုံ တွေ ကို ဖော်ပြ ခဲ့ပြီး နယူး ကာဆယ် ဂန္ထ၀င် အလန်ရှီးယား နဲ့ ပင် တွစ်တာ တိုက်ပွဲ တွေ ဆင်နွဲခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါတယ် ။
အခု တစ်ကြိမ် မှာတော့ အိုဝင် ဟာ သူ့ရဲ့ စာအုပ် ထဲ မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ အင်္ဂလန် ကစား သမား ဟောင်း ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း ရဲ့ ၁၉၉၈ ခုနှစ် က အဖြစ် အပျက် အကြောင်း ကို ထည့်သွင်း ရေးသား ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘက်ခမ်း ဟာ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ ဖလား မှာ အင်္ဂလန် ရဲ့ အရေးပါ တဲ့ ကစား သမား တစ်ဦး အဖြစ် နဲ့ ပါဝင် ခဲ့ပြီး အာဂျင်တီးနား နဲ့ ရင်ဆိုင် ရတဲ့ ၁၆ သင်း အဆင့် မှာ အနီကဒ် နဲ့ အထုတ် ခံ ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဘက်ခမ်း ဟာ လဲကျ နေရာ ကနေ အာဂျင်တီးနား ကစား သမား ဒီယေဂို ဆီးမြွန်းနီ ( လက်ရှိ အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် နည်းပြ ) ကို ခြေထောက် မြောက် ကန် မိသလို ဖြစ်ခဲ့တာ ကြောင့် ထုတ်ပယ် ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန် ဟာလည်း ပင်နယ်တီ အဆုံး အဖြတ် မှာ အရေးနိမ့် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒီဖြစ်ရပ် အပြီးမှာ ဘက်ခမ်း ဟာ အင်္ဂလိပ် မီဒီယာတွေ ရဲ့ ဝေဖန် ထိုးနှက်မှု ကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ခံခဲ့ရ သလို ပရိသတ်တွေကလည်း တရားခံ တစ်ယောက်လို ဆက်ဆံ ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဘက်ခမ်း ဟာ ဒီ အရိပ်မည်း ကို ဖျောက်ဖျက် နိုင်ဖို့ အပြင်းအထန် ကြိုးစားခဲ့ ပြီး မကြာခင် မှာပဲ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာကို ပြန်လည် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။
အိုဝင် ကတော့ သူ ဟာ ဘက်ခမ်း ရဲ့ အနီကဒ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အပြစ်တင် ဝေဖန်လိုစိတ် မျိုးမှ မရှိ ပေမယ့် အနီကဒ် ကိစ္စ ကတော့ ဘက်ခမ်း တစ်ယောက် နုံအ ခဲ့တယ် လို့ ထင်မြင် မိကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“ဒီ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပထမဆုံး တွေးမိတာက ဒါဟာ အနီကဒ် ပြသင့်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ခြေ မြောက်လိုက်တဲ့ ကိစ္စ ကတော့ တကယ်ကို ကလေးဆန် ပါတယ် ။ မတော်တဆ ထိမိတာ လို့ ဆင်ခြေ ပေးချင်တဲ့ သူတွေ ရှိကောင်း ရှိမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့ ဖလား လိုမျိုး အောင်ပွဲ ကို ရချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အရာရာ မှာ ထိန်းချုပ် နိုင်စွမ်း ရှိဖို့ လိုအပ် ပါတယ်”
“တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သာ ၁၁ ယောက် အပြည့် ဆက်ရှိ နေမယ် ဆိုရင် အာဂျင်တီးနား ကို အနိုင် ရနိုင် မလား ဆိုတာ မသိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဆယ်ယောက် တည်းနဲ့ လည်း ကောင်းကောင်း ကစားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ တကယ်လို့ အာဂျင် တီးနား ကို ကျော်ခဲ့ ရင် နယ်သာလန် ၊ ဘရာဇီး တို့ နဲ့ ကစားရ နိုင် ပါတယ် ။ သူတို့ ကို နိုင် မလား ဆိုတာလည်း ကျွန်တော် အတပ် မပြောနိုင် ပါဘူး”
“ကျွန်တော် သေချာ ပေါက် ပြောနိုင် တာကတော့ ဘယ်သူ မှ ဒီအနီကဒ် အတွက် ဒေးဗစ် ကို အပြစ် မတင် ခဲ့ကြ တာပါပဲ ။ ပွဲပြီး အ၀တ်လဲခန်း ထဲ မှာ သူ့ ရဲ့ အနီကဒ် အကြောင်း တစ်ခွန်းမှ မပါခဲ့ ပါဘူး ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လည်း ဒေးဗစ် ကို စကားနည်းနည်း လောက် ပြောပြီး နှစ်သိမ့် ပေးခဲ့ ပါတယ်”
“ဒါပေမယ့် အင်္ဂလန် ကို ပြန်လာချိန် မှာတော့ သူ နဲ့ ကျွန်တော် က လုံးလုံး ခြားနား နေခဲ့ ပါတယ် ။ သတင်းစာတွေ ထဲမှာ ကျွန်တော် က နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် သူရဲကောင်း ဖြစ်နေပြီး ဒေးဗစ် က တော့ လုံးဝ ဗီလိန် ဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ် ။ သူနဲ့ ကျွန်တော့ ကို တစ်ဖက် စီထားပြီး ဖော်ပြ ခဲ့ကြတာပါ ။ ဒေးဗစ် အတွက် ဘယ်လောက် ခက်ခဲ မလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် ခံစား မိခဲ့ ပါတယ်”
“ဒီကိစ္စ တွေ အတွက် ကျွန်တော့ မှာ တာဝန် မရှိ ပါဘူး ။ ဒေးဗစ် နဲ့ ကျွန်တော့ အကြားမှာ ဘာပြဿနာ မှ မရှိ ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဗစ်တိုးရီးယား ဘက်ခမ်း ကတော့ ကျွန်တော့ ကို လူသိရှင်ကြား ထောက်ခံ စကား ပြောစေချင် ခဲ့ပုံ ပါပဲ ။ ကျွန်တော် က ၁၈ နှစ် ပဲ ရှိပါ သေးတယ် ။ ဒေးဗစ် က ကျွန်တော့ ထက် ပိုပြီး စီနီယာ ကျတဲ့ ကစား သမားပါ ။ သူ့ အတွက် ကျွန်တော် က ဘာလုပ်ပေးနိုင် မှာလဲ ။ အဲ့လို လုပ်ပေးဖို့ လည်း စိတ်ကူး မရှိ ခဲ့ ပါဘူး” လို့ အိုဝင် က သူ့ရဲ့ စာအုပ် ထဲမှာ ရေးသားခဲ့ တဲ့ အကြောင်း အရာတွေ ကို ပြန်ပြောင်း ပြောပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မိုက်ကယ် အိုဝင် ဟာ အဆိုပါ ပွဲ မှာ အာဂျင်တီးနား ကစား သမားတွေ ကို ကျော်ဖြတ် ပြေးလွှားပြီး လှပ တဲ့ တစ်ကိုယ်တော် သွင်းဂိုး ကို သွင်းယူ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီဂိုး ဟာ ဒီယေဂို မာရာဒိုနာ ရဲ့ ၁၉၈၆ ကမ္ဘာ့ ဖလား ပြိုင်ပွဲ က တစ်ကိုယ်တော် သွင်းဂိုး အပြီး ဒုတိယ မြောက် လူကြိုက် အများဆုံး နဲ့ အကောင်းဆုံး ကမ္ဘာ့ ဖလား သွင်းဂိုး အဖြစ် သတ်မှတ် ခြင်း ခံခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဘကျခမျး ကိုပါ အလှတျမပေးတဲ့ အိုဝငျ . . . ၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားက ဖွဈရပျအတှကျ ဝဖေနျပွောဆို
မိုကျကယျ အိုဝငျ ဟာ သူ့ရဲ့ ဘောာလုံး သမား ဘဝ တဈလြောကျ ဖွတျသနျးလာ ခဲ့မှု တှေ ကို စာအုပျ အဖွဈ စုစညျး ထုတျဝေ တော့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ စကျတငျဘာ ၅ ရကျနေ့ ( မနကျဖွနျ ) မှာ စာအုပျ ၊ e-book ၊ အသံဖိုငျ စတဲ့ ပုံစံ မြိုးစုံ နဲ့ ဖွနျ့ခြီ မယျ့ သူ့ရဲ့ Reboot : My Life, My Time စာအုပျ အတှကျ အမွညျးစာသား တှေ ဟာ သတငျး ဌာန တှဆေီ ရောကျရှိ နခေဲ့ပွီ ပဲ ဖွဈပါတယျ ။
အိုဝငျ ရဲ့ စာအုပျ အမွညျးမှာ တော့ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ ကို ဘယျလို ရောကျလာပုံ ၊ နယူး ကာဆယျ မှာ လုံးဝ မကစားခငျြ ခဲ့ ပုံ တှေ ကို ဖျောပွ ခဲ့ပွီး နယူး ကာဆယျ ဂန်ထဝငျ အလနျရှီးယား နဲ့ ပငျ တှဈတာ တိုကျပှဲ တှေ ဆငျနှဲခဲ့ပွီး ဖွဈ ပါတယျ ။
အခု တဈကွိမျ မှာတော့ အိုဝငျ ဟာ သူ့ရဲ့ စာအုပျ ထဲ မှာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နဲ့ အင်ျဂလနျ ကစား သမား ဟောငျး ဒေးဗဈ ဘကျခမျး ရဲ့ ၁၉၉၈ ခုနှဈ က အဖွဈ အပကျြ အကွောငျး ကို ထညျ့သှငျး ရေးသား ခဲ့ကွောငျး ဖျောပွ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဘကျခမျး ဟာ ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ ဖလား မှာ အင်ျဂလနျ ရဲ့ အရေးပါ တဲ့ ကစား သမား တဈဦး အဖွဈ နဲ့ ပါဝငျ ခဲ့ပွီး အာဂငျြတီးနား နဲ့ ရငျဆိုငျ ရတဲ့ ၁၆ သငျး အဆငျ့ မှာ အနီကဒျ နဲ့ အထုတျ ခံ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဘကျခမျး ဟာ လဲကြ နရော ကနေ အာဂငျြတီးနား ကစား သမား ဒီယဂေို ဆီးမွှနျးနီ ( လကျရှိ အသကျလကျတီကို မကျဒရဈ နညျးပွ ) ကို ခွထေောကျ မွောကျ ကနျ မိသလို ဖွဈခဲ့တာ ကွောငျ့ ထုတျပယျ ခံခဲ့ရတာ ဖွဈပွီး အင်ျဂလနျ ဟာလညျး ပငျနယျတီ အဆုံး အဖွတျ မှာ အရေးနိမျ့ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
ဒီဖွဈရပျ အပွီးမှာ ဘကျခမျး ဟာ အင်ျဂလိပျ မီဒီယာတှေ ရဲ့ ဝဖေနျ ထိုးနှကျမှု ကို ပွငျးပွငျး ထနျထနျ ခံခဲ့ရ သလို ပရိသတျတှကေလညျး တရားခံ တဈယောကျလို ဆကျဆံ ခဲ့ကွပါတယျ ။ ဘကျခမျး ဟာ ဒီ အရိပျမညျး ကို ဖြောကျဖကျြ နိုငျဖို့ အပွငျးအထနျ ကွိုးစားခဲ့ ပွီး မကွာခငျ မှာပဲ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခွငျး မတ်ေတာကို ပွနျလညျ ရရှိ ခဲ့ ပါတယျ ။
အိုဝငျ ကတော့ သူ ဟာ ဘကျခမျး ရဲ့ အနီကဒျ နဲ့ ပတျသကျပွီး ဘယျလို အပွဈတငျ ဝဖေနျလိုစိတျ မြိုးမှ မရှိ ပမေယျ့ အနီကဒျ ကိစ်စ ကတော့ ဘကျခမျး တဈယောကျ နုံအ ခဲ့တယျ လို့ ထငျမွငျ မိကွောငျး ရေးသား ဖျောပွ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
“ဒီ ကိစ်စ နဲ့ ပတျသကျပွီး ပထမဆုံး တှေးမိတာက ဒါဟာ အနီကဒျ ပွသငျ့တဲ့ ကိစ်စ မဟုတျဘူး ဆိုတာပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ ခွေ မွောကျလိုကျတဲ့ ကိစ်စ ကတော့ တကယျကို ကလေးဆနျ ပါတယျ ။ မတျောတဆ ထိမိတာ လို့ ဆငျခွေ ပေးခငျြတဲ့ သူတှေ ရှိကောငျး ရှိမှာပါ ။ ဒါပမေယျ့ ကမ်ဘာ့ ဖလား လိုမြိုး အောငျပှဲ ကို ရခငျြတယျ ဆိုရငျတော့ အရာရာ မှာ ထိနျးခြုပျ နိုငျစှမျး ရှိဖို့ လိုအပျ ပါတယျ”
“တကယျလို့ ကြှနျတျောတို့ သာ ၁၁ ယောကျ အပွညျ့ ဆကျရှိ နမေယျ ဆိုရငျ အာဂငျြတီးနား ကို အနိုငျ ရနိုငျ မလား ဆိုတာ မသိပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ဆယျယောကျ တညျးနဲ့ လညျး ကောငျးကောငျး ကစားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ တကယျလို့ အာဂငျြ တီးနား ကို ကြျောခဲ့ ရငျ နယျသာလနျ ၊ ဘရာဇီး တို့ နဲ့ ကစားရ နိုငျ ပါတယျ ။ သူတို့ ကို နိုငျ မလား ဆိုတာလညျး ကြှနျတျော အတပျ မပွောနိုငျ ပါဘူး”
“ကြှနျတျော သခြော ပေါကျ ပွောနိုငျ တာကတော့ ဘယျသူ မှ ဒီအနီကဒျ အတှကျ ဒေးဗဈ ကို အပွဈ မတငျ ခဲ့ကွ တာပါပဲ ။ ပှဲပွီး အဝတျလဲခနျး ထဲ မှာ သူ့ ရဲ့ အနီကဒျ အကွောငျး တဈခှနျးမှ မပါခဲ့ ပါဘူး ။ ကြှနျတျော ကိုယျတိုငျ လညျး ဒေးဗဈ ကို စကားနညျးနညျး လောကျ ပွောပွီး နှဈသိမျ့ ပေးခဲ့ ပါတယျ”
“ဒါပမေယျ့ အင်ျဂလနျ ကို ပွနျလာခြိနျ မှာတော့ သူ နဲ့ ကြှနျတျော က လုံးလုံး ခွားနား နခေဲ့ ပါတယျ ။ သတငျးစာတှေ ထဲမှာ ကြှနျတျော က နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျ သူရဲကောငျး ဖွဈနပွေီး ဒေးဗဈ က တော့ လုံးဝ ဗီလိနျ ဖွဈနခေဲ့ ပါတယျ ။ သူနဲ့ ကြှနျတော့ ကို တဈဖကျ စီထားပွီး ဖျောပွ ခဲ့ကွတာပါ ။ ဒေးဗဈ အတှကျ ဘယျလောကျ ခကျခဲ မလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျော ခံစား မိခဲ့ ပါတယျ”
“ဒီကိစ်စ တှေ အတှကျ ကြှနျတော့ မှာ တာဝနျ မရှိ ပါဘူး ။ ဒေးဗဈ နဲ့ ကြှနျတော့ အကွားမှာ ဘာပွဿနာ မှ မရှိ ပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ဗဈတိုးရီးယား ဘကျခမျး ကတော့ ကြှနျတော့ ကို လူသိရှငျကွား ထောကျခံ စကား ပွောစခေငျြ ခဲ့ပုံ ပါပဲ ။ ကြှနျတျော က ၁၈ နှဈ ပဲ ရှိပါ သေးတယျ ။ ဒေးဗဈ က ကြှနျတော့ ထကျ ပိုပွီး စီနီယာ ကတြဲ့ ကစား သမားပါ ။ သူ့ အတှကျ ကြှနျတျော က ဘာလုပျပေးနိုငျ မှာလဲ ။ အဲ့လို လုပျပေးဖို့ လညျး စိတျကူး မရှိ ခဲ့ ပါဘူး” လို့ အိုဝငျ က သူ့ရဲ့ စာအုပျ ထဲမှာ ရေးသားခဲ့ တဲ့ အကွောငျး အရာတှေ ကို ပွနျပွောငျး ပွောပွ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
မိုကျကယျ အိုဝငျ ဟာ အဆိုပါ ပှဲ မှာ အာဂငျြတီးနား ကစား သမားတှေ ကို ကြျောဖွတျ ပွေးလှားပွီး လှပ တဲ့ တဈကိုယျတျော သှငျးဂိုး ကို သှငျးယူ ပေးခဲ့ ပါတယျ ။ ဒီဂိုး ဟာ ဒီယဂေို မာရာဒိုနာ ရဲ့ ၁၉၈၆ ကမ်ဘာ့ ဖလား ပွိုငျပှဲ က တဈကိုယျတျော သှငျးဂိုး အပွီး ဒုတိယ မွောကျ လူကွိုကျ အမြားဆုံး နဲ့ အကောငျးဆုံး ကမ်ဘာ့ ဖလား သှငျးဂိုး အဖွဈ သတျမှတျ ခွငျး ခံခဲ့ ရ ပါတယျ ။